Fitsapana matoatoaBSD | Avy amin'ny Linux
Alf | | Fitsinjarana, hafa, soso-kevitra
Ahoana ihany, voajanahary fa rehefa misy olona manomboka amin'ny GNU / Linux, mijaly amin'ny versionitis dia misy ireo izay tsy.
Ohatra, nanomboka tao Ubuntu aho, te hahalala fizarana hafa fa nijanona tao Ubuntu foana aho, saingy nomena ny fanapahan-kevitra raisin'i Canonical momba ity rafitra ity, ary azo atao izany esory ny fametrahana hafa, ary raha somary paranoida kely aho dia mety ho very ny minicd koa, ary satria efa ela aho no nanao fametrahana kely dia manomboka mitsapa rafitra hafa aho amin'ny mety fifindra-monina.
Debian ny safidiko voalohany, saingy tsy misy mahazo ahy raha mahita safidy hafa aho, iray amin'izany ny GhostBSD.
Te-hametraka FreeBSD efa ela aho, saingy tsy nanana traikefa ary te haka fotoana hianarana, ka hoy aho tamin'ny tenako fa tonga ny fotoana hanandramana BSD.
Avy eo miasà ho any am-piasana, nampidiniko ny GhostBSD-3.0-BETA1-lxde-i386.iso, nandritra ny 2 volana, saingy mbola tsy nametraka azy aho hatramin'izao.
Ny zavatra voalohany dia ny efijery izay manome antsika ny safidy boot:
Na avelantsika handeha ny aotra na miditra ny demos dia manomboka ny cd mivantana, raha vao manomboka isika dia afaka mahita birao tsy misy sary marobe eo amboniny, ankoatry ny fananana ny mombamomba ny LXDE mahazatra.
Ity fizarana ity dia manana safidy bebe kokoa hanovana ny sary an-tsary noho ireo atolotry ny fizarana hafa miaraka amin'ny LXDE
Na eo aza ny fahitalavitra mivantana dia tena haingana dia haingana, niserasera tamin'ny Internet aho, nandritra ny fotoana kelikely, ary tsy niadana mihintsy
Ka rehefa namaky aho ary manana ny boky fampianarana fametrahana FreeBSD (mifototra amin'ny FreeBSD ny ghostBSD) dia natomboko ny fametrahana, ny zavatra voalohany dia ny mifantina ny fiteny, avy eo ny layout keyboard.
Rehefa nisara-bazana dia namela ny safidy hampiasa ny kapila feno aho satria vita virtoaly izany ary tsy manana rafitra miasa hafa napetraka aho
Vantany vao tafasaraka isika dia angatahina ny angona momba ny mpampiasa, ny teny miafina root, sns.
Aorian'ny fikandrana fanamafisana
Rehefa manery izahay hametraka izany vokatra izany
Tamin'ity fotoana ity dia tsapako fa tsy nampiasa ilay boky fampianarana fametrahana aho, ity ampahany ity no lava indrindra, raha vantany vao vita ny fangatahana antsika hamerina
rehefa manomboka indray dia manana ny rafitra miaraka amin'ny toetran'ny LXDE, maivana ary tsy be entana
Tokony holazaiko fa ny fametrahana dia mihoatra ny mora, dingana vitsivitsy, asa lehibe ataon'ny mpamorona.
Mandritra ny fanombohan'ny cd mivantana sy ny rafitra napetraka dia misy dingana iray izay milaza mihoatra ny 8 noho ny hafainganana fa tsy haiko tsara ny mamaky azy io) ny fikirakirana tsy misy tariby mpamily, manome ahy izay tsy ananako izany, saingy noho aho ao anaty boaty virtoaly, tsy manana aho Fantatro.
Ny fahatsapana voalohany azoko nandritra ny fizotran'ny fanandramana sy ny fametrahana dia tena tsara,
Safidy tsara ho an'ny mpampiasa rehetra manomboka amin'ny ahiahy mitady safidy mankany Mswindows io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fitsapana matoatoaBSD
Eny, tsy sarotra ny mijery ny installer, mihodina ve izy sa ahoana no fizarana sy fanavaozana azy?
Sendra izany, nisintona GhostBSD aho izao mba hitsapana azy ary hitako ity lahatsoratra xD ity
Manaitra ahy ny hampiasa ny iray amin'ireo BSD (freebsd mba ho voafaritra manokana) saingy tiako ho fantatra ny fomba fifandraisan'ny BSD amin'ny PC, izany hoe inona no mahasamihafa azy amin'ny ArchLinux (izay ilay distro izay ihazakazako amin'izao fotoana izao), ny fomba fiasan'izy io na ny hafa. Ny fanontaniana dia mipoitra avy amin'ny lahatsoratra novakiako (tsy tadidiko hoe aiza) izay milaza fa ny BSD dia mitovy indrindra amin'ny UNIX misy ary ny Linux dia avy amin'ny UNIX, noho izany dia matahotra kely ny hifindra any BSD aho
Ny BSD dia tsy ny zavatra akaiky indrindra amin'ny UNIX, fa izy ireo dia UNIX. Izy ireo dia derivatives mivantana.
Miarahaba anao notfrombroklyn sy Rots87 !! Raha ny momba ny BSD dia tsy hoe avy amin'ny Unix izy ireo fa "IZAY" no fototry ny Unix, ny haben'ny kaody tany am-boalohany an'ny Unix no novolavolain'ny University of Berkley ary taty aoriana rehefa mandeha ary Avy amin'i "iza no manana azy", Berkley dia namolavola variant azy manokana mifototra amin'ny kaody novolavolain'izy ireo ary nosoratana indray ka teraka BSD ... tsara, izany no fantatro.
Raha ny momba ny fitoviana sy ny tsy fitovizany amin'ny Linux, dia heverina fa izay azontsika atao amin'ny Linux dia tokony ho azontsika atao amin'ny BSD, na dia mila mandinika bebe kokoa aza isika, satria angamba mila manangona rindrambaiko marobe amin'ny tanana isika. Eto aho mahita safidy 2 hanombohana amin'ny BSD, ny voalohany, amin'ny zavatra niavian'izy ireo tamin'ny linux angamba ny fametrahana an'i Debian kBSD, na dia avy amin'ny hitako aza ny fametrahana azy dia sarotra kokoa noho ilay natolotr'i Alf androany eto GhostBSD, ny faharoa dia ny fitsapana ny Ny kinova BSD ho an'ny "olombelona tsotra", henoko indray mandeha avy amin'ny DragonFly, saingy androany dia mahita "mety maty" bebe kokoa ity iray ity avy amin'ny Ghost.
Manoro hevitra aho fa hanao izay nataon'ny maro tamintsika rehefa nahafantatra Linux, mampiasa LiveCD, mahita ny fihetsiny, angamba mametraka milina virtoaly ary tsara, raha toa ka mandresy lahatra antsika handray ny dingana lehibe… «ny fametrahana !!!
Miarahaba ary manantena aho fa mandeha ireto data ireto !!
Tokony hiaiky aho fa * BSD dia asa miandry ahy, izay mitranga noho ny zava-misy tsotra tsy manana solosaiko manokana, ary tsy maintsy tehirizina ny angon-drakitra noho ny olan'ny fanovana ny File System, satria mampiato ahy izany.
hackloper775 dia hoy izy:
Well FreeBSD dia safidy tsara ary tokony ho rafitra tsy tokony hadino Unixero, efa ela aho no nampiasa azy ary tena tsara, ireo fonosana ihany no somary lany andro eo akaikin'ny fizarana Linux malaza indrindra.
Valiny amin'ny hackloper775
Izaho, toa an'i elav, dia tsy nanokana ny ora ho an'ny BSD sahaza azy, fa manantena aho fa amin'ny famoahana ny Debian kBSD sy ireo fonosana misy arofanina marobe ary ity lahatsoratr'i Alf ity dia tsy izaho irery, raha tsy betsaka ny olona ampirisihina, na dia hahafantatra azy aza. ...
Manantena aho fa ny hackloper775 dia te hizara amintsika bebe kokoa momba ny zavatra niainany tamin'ny BSD, satria rehefa nampiasaina io, ny mahatsara sy maharatsy azy ary ny sosokevitra momba ny BSD
Khourt, nanandrana ny Debian kfreebsd aho. Betsaka ny olona tia an'io, diso fanantenana aho. Te-hanandrana FreeBSD efa ela aho, saingy mbola tsy nanapa-kevitra.
Inona ny olana nanjo anao? Lazao anay fa zavatra tianao hosedraina io 🙁
Eny Eny Eny !! Lazao anay, inona no nandiso fanantenana anao (jereo fa nanantena mafy aho ...)
Ny tiako holazaina dia angamba hitrandraka aho, saingy ny fananana famerenana amin'ny olona efa mampiasa azy dia efa ho fantatro izay atrehako
raha ny amiko dia mitovy ihany. Nanandrana nametraka PCBSD sy FreeBSD aho, saingy tamin'ny tranga roa dia nisy fahatahorana kernel nanakana ahy tsy hametraka ilay rafitra. Nandinika imbetsaka tao amin'ny forum ofisialy aho ary nitady ny harato, saingy tsy nahita ny vahaolana mihitsy. toa tsy mifanaraka amin'ny Dell-nao ny BSD.
Ummm, andao ampidino izany ary jereo ny fomba!
Nametraka roa andro lasa izay tao amin'ny milina virtoaly PC-BSD 9.0 Isotope aho, izay tsotra be ny fametrahana ary manome anao safidy hametrahana tontolo birao sy fitaovana hafa toa ny samba, tsy mbola nanam-potoana hirosoana amin'izany aho,
fa ny mitady vaovao momba ny BSD dia mbola tsy nahita firaketana betsaka tamin'ny teny espaniola
Hiresaka momba ny PC-BSD aho, izay toa tsotra kokoa noho ity GhostBSD ity. Efa nijery an'io ve ianao? http://www.pcbsd.org/es/
Amin'ny alàlan'ny default dia manana KDE izy, na dia manana ny tontolo iainana hafa aza araka ny nolazain'i Davidlg, ary ny fametrahana programa dia tsotra toy ny misintona ny azo tanterahina avy amin'ny toerana anaovany azy, ary manindry Next -> Manaraka.
Efa ela aho no nanandrana izany ary miaiky aho fa gaga tamin'ny fampiasana azy mora foana.
Mikasika ny BSDs, ny tena maharesy lahatra ahy dia ny PCBSD, saingy mazava ho azy, raha mametraka zavatra aho dia mila ny fitaovako rehetra hanohanana ny sary intel sy ny Wi-Fi (ary toa tsy ilay akanjony mahery).
Ny BSD dia mbola an-taonany maro miala amin'ny GNU / Linux amin'ny resaka fanohanana haino aman-jery desktop ary fitaovana esoterika, tokony hanana antony marim-pototra ianao hampiasa BSD ary amin'ity tranga ity dia azo antoka fa noho ny iray amin'ireo derivatives FreeBSD (Open , Net, DragonFly, sns.) Satria tsy misy dikany ny fampiasana FreeBSD raha tsy hoe mila ZFS miaraka amin'ny distro lehibe GNU / Linux any ivelany any ny olona iray! 😀
Na mametraka mpizara !! Satria araka ny fantantsika, ny BSD dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanolorana fiarovana bebe kokoa, manokana ny OpenBSD, sa ny NetBSD ??? Tsy maintsy nanamarina ny fizahana fiarovana aho androany.
Ary raha ny amin'ny BSD efa an-taonany maro dia tsy hilaza afa-tsy aminao aho fa heverina fa ny kaody loharano mitovy amin'ny fampiharana maro dia azo atambatra ao amin'ny BSD, na dia mazava ho azy aza, ny mpampiasa farany dia miasa amin'ny Linux kokoa.
Nampahatsiahy ahy ianao rehefa nampiasa FreeBSD kely (ora firy) xD
Lahatsoratra tsara. Nanandrana pc-bsd aho nandritra ny 1 volana dia tiako izany, saingy somary antitra ny fonosana. Raha tsy izany dia mahatsapa haingana, tsiranoka, milamina ary tena mora ampiasaina izy. Manantena aho fa mbola misy lahatsoratra toa an'io.
BSD dia asaina mametraka mpizara, ho an'ny mpampiasa dia azo ampiasaina ihany koa izy io saingy manana fanohanana kely lavitra noho ny Linux ao amin'ilay faritra amin'ny fampiasana azy io ho toy ny rafitra birao. Nisedra pc-bsd aho ary na dia toa linux aza izy dia tsy mitovy, satria hafa ny fomba fiasany amin'ny lafiny sasany. Na dia avy amin'ny Linux aza ianao dia tokony hanana fotoana tsara ianarana azy.
Misaotra Alf, raha ny fanazavana dia hanaraka ny naoty nataonao momba ny toetran'ny BSD anao aho, ary tsara fa tsy mijanona ao amin'ny Linux fotsiny isika, satria tsy maintsy fantatsika fa misy tontolo ivelan'ny GNU / Linux ho fantatra, BSD, Indiana, Minix ...
Raha azonao atao ny milaza amiko ny fandehan'ny GhostBSD vs DragonFly sy Pc-BSD
–Khourt Raha azonao lazaina amiko ny fandehan'ny GhostBSD vs DragonFly sy Pc-BSD, -
Tsy dia hampitahako ny distro amin'ny xxx xxx xxx mahazatra, satria samy manana ny azy ny fizarana tsirairay.
Ny azoko atao na ahoana na ahoana dia ny fampisehoana ny fomba fizotrany eto, maneho hevitra fa toa ahy izany, ary amin'ny ankamaroany milaza raha mbola hanohy hampiasa azy io aho, satria afaka mampiasa azy ny tsirairay ary manatsoaka ny fehin-keviny momba ny hoe mety ve raha mampiasa distro iray na hafa.
Fialan-tsiny noho ireo lesoka tamin'ny tsipelina, satria nijanona tao ny klavier dia tsy fantatro izay fiteny ary tsy hitako ireo accents.
Ny fialantsiny Alf, ary inona no fahombiazana tsara ary nohazavaina ny "mifanohitra", fotsiny fa ny fampitahana azo ampiharina no tiako horesahina, ohatra aho hanomboka amin'ny fametrahana mora natolotrao tao amin'ny Ghost, raha ampitahaina amin'ny FreeBSD 8 (izay no notsapaiko. mandritra ny fotoana fohy), na ny maodely an-tsoratra Debian kBSD ... ary ny iray hafa, fantatray fa tsy misy kalitao ireo fonosana ireo, fa ahoana kosa ny amin'ny fanangonana? Mitovy tanteraka amin'ny Linux ve izy io? Tadidiko ohatra ny olana nisy ahy tamina fonosana iray taloha elabe izay nangataka fiankinan-doha "XFree86" na zavatra toa izany, izay heveriko fa ilay kinovan'ny Xorg taloha ... miady amin'ity iray ity ve ianao ?? Ary avy eo koa ahoana ny fampidirana mpanara-maso? Ny loharanom-baovao dia heverina fa mandeha ... sy izay rehetra fantatsika amin'ny teôlôjia, fa ahoana amin'ny fampiharana ???
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny valiny haingana
Amin'ny virtualbox dia mandeha tsara izy, ny olana dia tonga rehefa apetraka amin'ny milina tena izy, marina fa miaraka amin'ny nvidia farafaharatsiny miasa pc-bsd fa na ny ati na ny intels dia ny akanjony matanjaka ary raha tsy miresaka wireless, dia manantena ianao fa afaka mampiasa ilay Ireo mpamily Windows miaraka amin'ity famoronana lehibe ity izay ndisgen fa, hoy aho, antenaina. Tsy misy isalasalana fa ny BSD dia mifantoka bebe kokoa amin'ny mpizara noho ny birao, na dia miezaka mafy aza ny pc-bsd sy ghostbsd hanatsorana zavatra.
Izaho manokana dia tia pc-bsd betsaka, mamela anao hanana labiera indraindray. Marina fa manana ny app-café izy io fa manana ihany koa ny seranan-tsambo mandritra ny andro hifohazantsika te hiasa kely. Manantena aho fa haharitra ireo tetik'asa ireo.
Lahatsoratra tsara. Ny tena marina dia tsy miditra amin'ny Operating System hafa intsony aho. Ny nifindra tany Linux dia efa somary sarotra ny manaitra ny zavatra ao an-tsaiko indray.
Eny, raha mijanona mieritreritra azy ianao dia tsy dia sarotra loatra, satria hanomboka amin'ny heviny fototra dia mitovy amin'ny GNU / Linux, desktops mitovy amin'izany, KDE, Gnome, LXDE, E17, miaraka amin'ny WinMangers koa, OpenBOX, Flux , RazorQT,… .etc ary amin'ny ankapobeny dia manana repositories koa izy io, ary ny programa izay tsy hitanao satria manangona azy ianao (izay angamba ity no mety hanasarotra zavatra kely). Mampientanentana sy mahafantatra rafitra iray, ny firafiny, ny endriny ary ny fitaovany ity zavatra ity, saingy araka ny efa noresahiko teo aloha, azontsika atao ny manandrana azy amin'ny Live CD sy milina virtoaly, ary raha tiantsika izany dia manapa-kevitra ny tsirairay.
Raha nanana debian tao an-tsainao koa ianao dia afaka manandrana an'i Debian gnu / kfreebsd
Indray andro any hanandrana BSD aho, heveriko fa tsy dia mafy ny fanovana, fa amin'ny maody console dia tokony ankasitrahana bebe kokoa ny fanovana. Ho an'ny bebe kokoa noho izany ny fotoana drafitra 9, hahaliana izany 🙂
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny lahatsoratra. Sombiny iray ihany no zaraiko: ny matoanteny milaza hoe misy "miadana" ny zavatra iray dia tsy "mamporisika" (arakaraka ny fampiasanao azy ao amin'ny lahatsoratranao) fa MIORA sy MIadana. 😉
Hampahery ny fihisatra ve izany?
Izaho koa dia nijaly tamin'ny "versionitis" ary nanandrana distro maro alohan'ny nanapahako hevitra hamela ilay "Güin2" tsy hanandrana BSD mihitsy, ny safidiko farany ary ny "milina" an'ny milina fitaterako dia LM-13-KDE-64 miaraka amin'ny kernel 3.5.3 ary KDE 4.9.0 Navelako ho hany OS
Manoro hevitra izany ho an'ireo vao manomboka toa ahy aho.
Puffy dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ubuntu ho an'ny kamo aho ary mikasa ny hametraka winbugs minnetbook noho ny antony miasa fa mampitaha ny ghostbsd sy pcbsd hametraka ao amin'ny neetbook aho rehefa hitako hoe iza no mahavita mamantatra ny zavatra rehetra ataoko ho karatra tsy misy tariby ratsy an'ny ratsy; Na dia nanomboka tamin'ny Linux ho debianite mendrika aza aho ary taty aoriana dia slackero mendrika indrindra (slackware dia tsara tarehy x3), nahafantatra ny OpenBSD sy ny freeBSD ary raiki-pitia aho, tonga hatrany amin'ny fametrahana ny OpenBSD amin'ny solosaiko ary ny antsasaky ny fitantanana hametraka azy io ho rafitra birao amin'ny zava-drehetra. haino aman-jery ary napetrako tao amin'ny freeBSD nandritra ny fotoana kelikely ny raibeko, mahatsikaiky ny mahita ny fomba tsy nahafahanay nanao na inona na inona na dia teo aza ny faharanitan-tsaina nandritra ny herinandro maro izay nahitako azy nitovy tamin'ny windows xDD. Izaho dia OpenBSDero ary malalakaBSDero ao am-po> u <, raha ny resaka OpenBSD dia miorina amin'ny NetBSD sy DragonflyBSD dia sahiko ny milaza fa mbola sarotra kokoa noho ny openbsd manavakavaka izany satria miasa amin'ny teboka mametraka ny HD ao anaty solosaina, ny Internet ianao. amin'ny iray hafa ary toy izao: P. Fiarahabana avy amin'ny ubuntu ratsy fitondrako ratsy ary miala tsiny aho noho ireo lesoka tamin'ny tsipelina fa amin'ny 1.12 maraina izao ary niaraka tamin'ny asako dia namely ny klavier aho ...
Valiny tamin'i Puffy
tokony ho hitanao nohazavaina fa ny gnst bsd rehetra dia tsy gnu / linux, satria misy olona mety mikorontana
Jose Fernando Ayala placeholder image dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'ny fingotra ArchBsd aho, tsara izany ankoatr'izany dia ny fandefasana azy io, saingy tafahitsoka aho ary tsy mahatakatra na inona na inona aho mpampiasa linux fa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ireto aho raha misy te hanome ahy ny tongasoa, na izany aza satria tsy afaka nametraka terminator aho, ohatra, izahay mandra-pihaona
Valiny tamin'i Jose Fernando Ayala
manana aho dia hoy izy:
Raha ny fanazavana, efa nivoaka ny kinova vaovao an'ny GhostBSD 4 RELEASE, tena tsara.
Mamaly an'i tego
Tleyotl dia hoy izy:
Ny Asus EeePC 1201HA taloha misy RAM 2Gb dia niadana loatra tamin'ny Windows 7, ary nafana ihany koa. Nanandrana ny Windows 8.1 aho ary tsy resy lahatra na dia somary maivana aza. Miaraka amin'ny Linux dia misy ny olana ary mihamatanjaka kokoa ireo fanontana vaovao. Linux mint dia nijanona tsy ilaina intsony amiko. Ary farany, tamin'ny fametrahana Gosht BSD 4.0, dia namelombelona ny ekipako. Izy io dia miaraka amin'ny farafahakeliny ilaina. Mbola tsy manazava amin'ny trano fitehirizam-bokatra aho, saingy tsy mila izany koa aho izao. Ny olana iray dia tsy maintsy mandamina hamaky rakitra NTFS ianao, na dia mamaky tsara aza ny fizarazaran'i FAT. Ny hevitro dia hoe mafy orina izy io. Mampatsiahy ahy kely ilay solosaina voalohany nananako, Macintosh LC-III.
Fampitandremana: na dia UNIX aza ny baiko dia tsy mitovy amin'ny an'ny Linux. Tsara ny fanampiana Command console.
Valiny tamin'i Tleyotl
Fabian Rattoni dia hoy izy:
Tsy linux ny BSD, fa UNIX
ary izy ireo dia tsy antsoina hoe Distros na Distribution.
rafitra miasa feno izy ireo.
Tsy toy ny fizarana Linux dia ny Kernel (ny Linux mihitsy) sy ny fonosin'ireo programa voalamina anaty tontolo iray, BSD dia rafitra mandroso tanteraka
Valiny tamin'i Fabian Rattoni
Nandao ny ubuntu 18.04 fotsiny aho, ary nametaka windows 10 dr lite, nanandramana Ghostbsd, ny marina dia mametraka live mivantana aho, avy eo tsikaritro fa maivana amin'ny kapila, amin'ny optiplex Dell Gx 680, ondrilahy 3 gig landy, miaraka amin'ny firefox, 64 bits, azoko an-tsaina amin'ny milina vaovao fa tsy maintsy manidina !, Ny fotoana farany nanandramako zavatra nitovy tamin'izany dia ny freebsd tamin'ny 2011, ho hitantsika raha mijanona isika, fa raha ny kapila hafa tsy hitako dia ao anaty endrika hafa izy ireo ...
Ahoana ny fomba hamonoana mora foana ny fizotrany
Atsaharo ny Touchpad ao amin'ny KDE rehefa manoratra